Global Voices teny Malagasy » Kolombia: Ny Arepas, fomba fanao isaky ny tolakandro · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Avrily 2010 5:58 GMT 1	 · Mpanoratra Cati Restrepo Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Kolombia, Mediam-bahoaka, Sakafo, Zavakanto & Kolontsaina
Raha misy hivahiny any Colombia, dia efa sambasambao sahady ny mety hanasana anao hiara-hihinana “zavatra kely” eo anelanelan'ny amin'ny 3 hatramin'ny 6 ora hariva. Ny fandrosoana fangarona kafe sy sôkôla mafana miaraka amina tsakitsaky maro samihafa namboarin'ny tao an-trano ihany dia fomba amam-panao efa zary mahazatra ny ankamaroan'ireo fianakaviana Kolombiana maro rehefa mody masoandro iny.
Sary avy amin'i Lozbot ary ampiasana ny Creative Commons license
Ao amin'ny Reticente [es], blaogin'i Juan David Escobar, manoratra izy momba io fomba amam-panao io izay nifandovan'ny taranaka maro nifandimby :
Nolazain'ny renibeko anay fa manodidina ny amin'ny 3 ora tolakandro eo dia tokony hatsahatra daholo ny raharaha rehetra mba hihinanana zavatra mafana miaraka amina mofo na izay zavatra hita eo, fa dia mihinana “zavatra”.
Matetika no tsy izay, fa arepa io “zavatra” io. Nandritry ny tolakandro iray namirifiry, nandray anjara tamin'ny fanomanana ireo arepa misy “chócolo” (misy koban-katsaka malefaka) i Escobar [Avy amin'ny mpandika: ny arepa dia karazana biskoitra fanaon-dry zareo], izay lasa anton-dresaka koa any anaty blaogy Kolombiana hafa any. Ny Blog de Colombia [es] dia mitondra fanazavana momba ny lalan-kizorana raha hanamboatra arepa :
Isan'ny sakafo iray tena mampahalaza ny any Kolombia ny arepa. Raha hanao azy, tsotra daholo ny zavatra ilaina: koba avy amin'ny katsaka, rano, menaka, ary sira. Manaraka izay ny sesika, azon'ny tsirairay fidiana izay tiany hasesika ao anatiny, saingy ny tena manana ny lanjany dia arepa tsy misy fangaro. Na dia tsy mpifanara-tsaina loatra aza ry zareo ny amin'ny firenena mety ho niaviany [ ny arepa], ny arepa Kolombiana dia manana ny tantarany manokana sy ny fomba fanaovana azy.
Ny arepa misy chócolo dia vita avy amin'ny katsaka voatoto , araka izay ilazana azy ao amin'ny blaogy  Recetas de Cocina, Colombia Turística [es]:
Torotoroina ny chócolo (katsaka maitso), avy eo hosihosena halemy tsara. Tokony hahazo koba faran'izay malemy avy amin'io. Volavolaina hahazo endrika amin'izay ny arepa ary apetraka eo ambony ravin'akondro mba homasahana, avy eo dia avadika sy afindra ambony ravina vaovao indray, mandra-pahamasany tsara amin'ny lafiny roa.
Arahana fromagy ny fihinanana [es]  ny arepa of chócolo:
Araka izay tiana, zavatra roa no azo anaovana ilay fromazy: tetehana madinika, zaraina roa avy amin'ny sisiny ny arepa, atao ao anatiny ny fromazy, ary dia averina masahana kely indray ireo mandritry ny iray minitra eo ho eo, na kikisana ny fromazy, dia afangaro amin'ilay koba alohan'ny hamolavolana ny arepa.
Carlos Múnera, mpitoraka blaogy ao amin'ny Somos Iguales [es] dia manamafy fa :
Tena tsy misy toa azy ity nahandro ity, ny arepa misy chócolo miaraka amin'ny fromazy ary mbola tsara lavitra aza rehefa ampivadiana ka tonga ao aminy ny sôkôla misy ronono mandroatra. Eny tompoko, io fangaron-tsiro telo io dia nanosika tokoa ny hatsiaka tamin'ireny tolakandro nandrosoana azy miaraka amina mofo nandritra ny nivahiniananay ireny. Toy inona izay fahatsiarovanay ny fahatsorana sy ny maha-olona rehefa mihinana ny vokatry ny tany nokarakaraina tamin'ny hafanan'ny afo.
Sary avy amin'i Juan David Escobar ary nahazoana alàlana ny fampiasàana azy.
Farany, i Escobar avy amin'ny blaogy El Reticente [es] dia mamehy ny lahatsorany amin'ny hoe :
Raha ny Toekarena sy ny Tafika mihetsika any ambadika any ary ny tanàna mitombo sy mivoatra, izahay kosa mbola mahatazona ny ankamaroan'ireo fomba amam-panao faran'izay tsotra, eny fa na dia efa tsy ho hita intsony hatramin'ny taolan'ireo nenibe aza.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/04/18/5747/
 manoratra izy momba io fomba amam-panao io izay nifandovan'ny taranaka maro nifandimby: http://www.juandavidescobar.com/2009/11/hoy-el-algo.html
 dia mitondra fanazavana momba ny lalan-kizorana raha hanamboatra arepa: http://www.blogdecolombia.com/2008/11/receta-la-arepa-colombiana.html
 araka izay ilazana azy ao amin'ny blaogy: http://comidadecolombia.blogspot.com/2009/07/arepas-de-choclo.html
 Arahana fromagy ny fihinanana [es]: http://recetas-fercho.blogspot.com/2008/03/arepas-de-chocolo.html
 dia manamafy fa: http://www.ecbloguer.com/carlosmunera/?p=270